मैले बुझेको योग ? - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ७ असार २०७८, सोमबार २०:२४
योग, त्यो सात्विक भोजन हो, जुन अपनाउनै जाँदा क्रमशः एकपछि अर्को सकारात्मक प्रभाव देखिंदै जान्छ । दुध, दही अनि साग सब्जी खाए जस्तै, केही समय लिन्छ तर दुरुस्त लाग्छ । योग पूर्विय सम्यता र संस्कृतीको अनुपम उपहार हो ! हाम्रा अग्रज ऋृषीमुनिहरुको सदियौ देखिको खोज अनुसन्धान एवं अनुभवको उपज हो । सभ्य र असल समाज निर्माणको मेरुदण्ड नै मान्न सकिन्छ योगलाई ।
योग भन्ने बित्तिकै शरिर मर्काउने, उफ्रने अनि हल्लाउने मात्रै हो झै गर्छौ, हामी आधुनिक समाजका कतिपय युवा तथा तन्नेरीहरु । अनि जसले अलिक बुझैका छांै, उनीहरु पनि खास गरि शरिरको मोटोपन घटाउन अनि कुनै दिर्घ रोगको निदानका लागि गर्ने हो भन्ने ठान्छौं । अझै कतिपयले त जसको शरीर चलिरहन्छ, उसले योग किन पो गर्नुपर्छ र भन्ने पनि छ ?
यस्तै बुझाइ अनि चिन्तनका कारण युगौ देखिको हाम्रै आफ्नो (नेपालकै भुमिको) अमुल्य खजाना भएरै पनि हामी नेपालीले खासै लाभ लिन सकेका छैनौं जति अहिले बिदेशीहरुले लिन थालेका छ्न । अहिले आएर यो नेपाल भुमिकै मौलिक उत्पादन हो, जहाँ पतंजली लगायत कतिपय ऋृषीमुनीहरुको वर्षौको साधना एवं त्याग अनि तपस्या मिसिएको छ भन्दा नि लाज हुने स्थिति बन्दैछ । बैदिक ज्ञान, शास्त्र अनि योगको उपयोग खासगरि विकसित मुलका समाजहरुमा यसरी फैलाउँदै लगेका छन् कि, मानौ त्यो उनीहरुकै पुर्खाको उपज थियो ।
सामन्य भाषामा भन्दा योगभित्र ब्यायाम, आसन अनि प्राणायाम गरी ३ तह हुन्छन् । ध्यान अर्थात मेडिटेशन प्रत्यक्षतः योगभित्र पर्दैन र पनि योग साधना कै एक अभिन्न अंगको रुपमा अपनाउन सकिन्छ । योगमा यम, नियम, आहार, प्रत्याहार हुँदै समाधि सम्मको ८ वटा चरण हुन्छन् । योग साधना घटित हुनका लागि पात्रता निर्माण हुनु जरुरी छ र त्यसका लागि शुरुदेखि नै स्वः अनुशासन अर्थात यम, नियम सहित आहार मिलाउँदै लग्नु जरुरी छ । यसो गर्दा मन, शरिर र क्रियाका बीच सही सन्तुलन कायम हुँदै जान्छ । शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक तवरले शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर बाच्ने कला हो, योग । रोगीका लागि योग एक चिकित्सा पद्धति हो भने निरोगीका लागि जीवन जीउने कला ।
के पाइन्छ योग गर्दा ?
योगको उपयोगीता र महत्वको त चर्चा गरि साध्य नै छैन । सामन्यत हामी स्वस्थ तनका लागि योग गर्ने गर्छौ । तर तनको स्वास्थ्य भन्दा मन अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य अधिक मुल्यवान हुन्छ, हाम्रो मानव जीवनका लागि, जुन योग साधनाका माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं । योग साधनामा अभ्यस्त हुँदै गएपछि मन र शरिरका बीच दिगो सन्तुलन कायम रहन्छ ।
अन्तरमनको गहिराईदेखि खुशी र आनन्दभाव जाग्दछ । साधक व्यक्ति शान्त, स्थिर एवं सौम्य देखिन्छ । तव साधक ब्यक्तिले मनमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै आफ्नो लक्ष्य चुम्न सफल हुन्छ । वस, यहीबाट दया, करुणा, प्रेम अनि आपसी सद्भाव र सहकार्यको मुल नै फुट्दछ । योगको यही बहुउपयोगी एवं अमुल्य गुणका कारण सारा विश्वजगत आज योगको पछि कुदेको छ । वर्तमानको बहुआयामिक तनावग्रस्त जीवनबाट मुक्तिको बाटो पनि निसन्देह योग नै हो ।
भगवत गीतामा योग किन भन्ने बडो सुन्दर ब्याख्या छ । जस अनुसार “दुःख–सुख, लाभ–हानी, शत्रु–मित्र, शीत तथा उष्ण आदि द्वन्दमा सर्वत्र समभाव राख्ने योग हो ।”
योगा हैन, योग नै भनौं र आफ्नो मौलिक पन बचाऔं । हामी बोली चालीमा योगा भन्छौं नि, त्यो भारतीय लवज हो । अनि अंग्रजी लवज अनुसार पनि योगा भन्ने परेको होला । तर यो खासमा योगा नभई योग हो ।
अतः योगलाई रोग निको पार्ने र शरिर मिलााउने फगत एक औजारका रुपमा मात्रै नबुझौं, नलिऔं । जीवन र जगतसँग जोड्दै दीर्घकालिन लाभ उठाऔं ।
योगा हैन – योग भनौ
रहर चल्दा मात्रै किन – सधै गरौ !